Rooble oo caawa la kulmay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif | allsanaag
Rooble oo caawa la kulmay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif
12th May 2021 admin Category :
Ra’iisul Wasaare Rooble oo caawa la kulmay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, waxayna ka wadahadleen sidii la isaga kaashan lahaa nabad gelyada Muqdisho iyo arrimaha doorashooyinka.
Intii uu kulankan socday Ra’iisul wasaaraha ayaa Sheekh Shariif la wadaagay qorshaha xukuumadiisa ee ku aadan inay dalka ka dhacdo doorasho xasiloon oo loo dhanyahay.
Markii uu soo dhamaaday kulankaas waxaa faahfaahin ka bixiyey afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Mucalimuu, isagoo sheegay in kulankaan diirada lagu saaray duruufaha uu maanta dalku marayo, gaar ahaan xasaradihii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane @MohamedHRoble ayaa la kulmay Madaxweynihii hore ee dalka mudane @HESharifShAhmed oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka, xasilloonida caaasimadda iyo arrimaha doorahooyinka dalka. pic.twitter.com/NhwP3zQdYy
— SomaliPM (@SomaliPM) May 2, 2021
← Rooble oo iclaamiyay xilliga uu dhacayo Shirka Golaha Wadatashiga Qaran Dad aan Burburinta Dhib u Arag →